Iindaba - Unxibelelwano lwenethiwekhi yabucala kwi-COVID-19
Unxibelelwano lwenethiwekhi yabucala kwi-COVID-19
Unyaka ka-2020 kufanele ukuba ibe ngunyaka ongaqhelekanga, i-COVID-19 igqugqise ihlabathi kwaye izise intlekele engazange ibonwe ebantwini kwaye ichaphazela wonke umntu kwihlabathi liphela. Ngokumalunga ne-09 kaJulayi, ngaphezulu kwe-12.12 m amatyala aqinisekisiwe kwihlabathi liphela, kwaye amanani abonisa ukuba isakhula. Ngeli xesha linzima, iKingtone ibisoloko izama konke okusemandleni ethu ukuphumelela idabi elichasene ne-COVID-19 ngokusebenzisa ubuchule bethu.
Ngeli xesha linzima, nokuba ukulawulwa kwetrafikhi enkulu, ulwabiwo lwamaziko onyango olungxamisekileyo, kunye nokuhanjiswa, okanye abasebenzi bezempilo banyanga izigulane ezosulelekileyo emsebenzini okanye uxinzelelo olusuka kumgaqo-nkqubo wokufika ekhaya, bonke babeka iimfuno eziphezulu kunxibelelwano olusebenzayo. Indlela yokunxibelelana kumgama okhuselekileyo, nokusebenza ngokufanelekileyo nangocwangco kwindawo entsonkothileyo, kubalulekile kwaye kukwagqamile uvavanyo lonxibelelwano olungxamisekileyo.
Ngenxa yokuba inethiwekhi yabucala isebenza kwibhendi yabucala yabucala, kukho iingenelo ezininzi kunenethiwekhi yoluntu ngeli xesha linzima.
1. Inkqubo ikhuseleke ngakumbi kwaye ithembekile;
2. Umnxeba weqela, umnxeba ophambili kunye nezinye iimpawu kunye nenzuzo yenethiwekhi yangasese ihlangabezana nomyalelo ochanekileyo kunye neemfuno zokucwangcisa;
3. Ngexesha elifanayo nokucwangcisa ilizwi, inkqubo yenethiwekhi yabucala inokusasaza imifanekiso, iividiyo, iindawo, kunye nolwazi olukhawulezileyo.
Kumlo ochasene ne-COVID-19, unxibelelwano lwenethiwekhi yabucala lube yinkxaso ebalulekileyo kumlo ochasene ne-COVID-19.
Uninzi lwezibonelelo zonyango zixhomekeke kwinkqubo yerediyo ye-walkie-talkie ukuphucula unxibelelwano phakathi kwabasebenzi ngexesha le-COVID-19. Xa ujongene nobomi bomntu, okanye impilo yakhe, ukunxibelelana yeyona nto ibalulekileyo. Isebenza unxibelelwano lunokunceda abasebenzi bokhathalelo lwempilo baphucule ukuhamba kwabo komsebenzi.
UVicky Watson, umalathisi wabongikazi, uthi i-walkie talkie iyamnceda aphucule ukusebenza kakuhle. “Iminyaka emininzi, sichithe ixesha sibaleka sizama ukukhangela oogxa bethu, kodwa u-walkie talkie mkhulu kangangokuba akufuneki sibaleke sikhangela umntu. Kwaye i-walkie talkie ayibizi kakhulu kunezinye izixhobo zonxibelelwano. Kufuneka sicofe iqhosha kuphela; emva koko singathetha.” Kukho iimeko ezininzi zokubonisa indlela unxibelelwano olungxamisekileyo lusebenza ngayo.
I-kingtone ERRCS (inkqubo ye-Emergency Radio Response Communication) izisombululo zidibanisa iintlobo zezisombululo zonxibelelwano. Isisombululo se-Kingtone ERRCS sijolise ekusekeni umyalelo ongxamisekileyo kunye neqonga lokucwangcisa ulwazi kubathengi, elingathembeli kwinethiwekhi yoluntu, ukugubungela umgama omde (ukuya kwi-20km), kwaye inokubonelela ngokubeka iliso, i-alarm yangaphambili, kunye noncedo lokuhlangula ngokusebenzisa ukuqhubela phambili. ubugcisa.
Okwangoku, imeko iya iphucuka imihla ngemihla, engenakuhlukaniswa nokuzinikela ngokungazingci kwabasebenzi bezempilo, abasebenzi bakarhulumente, kunye namavolontiya, njl. amashishini kwicala lonxibelelwano lomnatha. Ubhubhani wehlabathi lonke awukapheli; umsebenzi usenzima. Kungakhathaliseki ukuba nini kwaye phi, kukholelwa ukuba iKingtone iya kuhlala ihlangabezana nesidingo sothintelo kunye nolawulo lobhubhane, kwaye iya kwenza konke okusemandleni ethu ukunceda kule mfazwe yobhubhane.